Andao samy hanohana ny GNU MediaGoblin! | Avy amin'ny Linux
Andao samy hanohana ny GNU MediaGoblin!
tsy tia | | GNU / Linux, hafa
Andro vitsy lasa izay dia nanomboka ny fanentanana fitadiavam-bola ho an'ny tetikasa vaovao, GNU MediaGoblin.
Misy roa andro mandra-pikaton'ny fampielezan-kevitr'izy ireo ary nanangona vola kely mihoatra ny $ 30,000 amin'ireo 60,000 nangatahiny izy ireo. Mila ny fanohanan'ny rehetra afaka manohy ny tetikasa.
Saingy alohan'ny hanohizako mamporisika anao hanome ny vola any am-paosinao dia te-hijanona kely aho ary hanazava ny antony maha-zava-dehibe amiko ny itomboan'ity tetikasa ity.
1 Tombontsoa ho antsika rehetra ny fanapariaham-pahefana
2 Ary inona no azoko?
Tombontsoa ho antsika rehetra ny fanapariaham-pahefana
GNU MediaGoblin dia tetikasa mifantoka amin'ny fanaparitahana atiny multimedia, toy ny sary, horonan-tsary ary ny feo. Tetikasa iray izay hatrany am-piandohana dia mikendry ny hisolo ny YouTube, DeviantArt, Flickr sy ny hafa dia maniry fatratra ny tsy marina ary marina tokoa fa ny MediaGoblin dia mbola tsy afaka miatrika azy ireo amin'ny fivoaran'ny fivoarana misy azy.
Na izany aza, mampanantena ny tetikasa. Vantany vao mahazo ny famatsiam-bola ilaina izy ireo; ny ampahany sarotra indrindra sy lehibe indrindra amin'ny tetik'asa dia hanomboka: ny federasiona. Noho izany, ireo izay manana tranga manokana dia afaka hifanerasera amin'ireo izay voasoratra ara-panjakana. Ahoana anefa no anampian'izany antsika?
Betsaka no hieritreritra fa ny safidy hafa ankehitriny dia ampy amin'ny fampiasana tiantsika omena azy ireo. Flickr dia nanaisotra kely ireo mpaka sary mampiasa azy, na ireo matihanina na ireo izay mandray azy ho fialamboly, ny DeviantArt no fialofan'ny olona maro manana zavakanto nomerika, manana lohahevitra an-taonina, famolavolana fampiharana ary lisitra lava fanaingoana. Vimeo dia manao fampisehoana tena tsara amin'ny seho fampisehoana fohy sy horonan-tsary amin'ny rivotra iray kanto.
Andao alao sary an-tsaina ity tranga manaraka ity. Mpaka sary ianao. Toy ny maro hafa, te-hanangana tranokalanao manokana ianao hampiroborobo ny asanao. Satria asanao io ary irinao ho hitan'izao tontolo izao. Saingy ny famoronana tranokalanao manokana dia manilika anao amin'ireo vondrom-piarahamonina efa niorina. Vahaolana? Atsangano ny MediaGoblin anao manokana, izay afaka manome tombony anao.
Mora izy io. Miaraka amin'ny faharetana kely sy fanampiana avy amin'ny fiarahamonina azonao atao apetraho amin'ny mpizara ary dia izay. Tsy mila mandoa olona ianao raha te hanao tranokala Flash ho anao irery ihany no afaka mampiasa.
Azonao atao ny manova azy araka ny itiavanao azy. Mazava ho azy, rindrambaiko maimaimpoana i GNU MediaGoblin, misy eo ambanin'ny AGPL. Raha ny marina dia efa misy maromaro plug-ins mamela ny hanohana hatramin'ny maodely 3D. Toa an'ity sa mora miovaova? Ary manohana lohahevitra hatramin'ny voalohany izy io. Ny fanaovana iray ho an'ny ohatrao dia mahafinaritra ary efa misy ny olona nahavita azy.
Manome tombony hafa anao izany. Efa nametraka rafitra fanehoan-kevitra manohana ny Markdown, metadata EXIM, syndication Atom, fahazoan-dàlana malefaka ary fanangonana. Efa azo ampiasaina izy io ankehitriny.
Mazava ho azy, somary vitsivitsy ny endri-javatra tsy hita; toy ny fanarahan-dalàna ataon'ny mpampiasa, fanatsarana lehibe amin'ny fanehoan-kevitra, API ary ny hafa; inona Teny an-dàlana ry zareo na azo atao izany amin'ny alàlan'ny fanitarana ary azo inoana fa manana izany isika rehefa tonga ny federasiona. Hiresaka momba ny GNU MediaGoblin 2013 izahay amin'ny taona 1.0, vonona ny handray amin'ny Internet iray manontolo.
Saingy tsy ho tanteraka io ho avy mamirapiratra io raha tsy misy fanampiana. Roa andro sisa. Fantatro fa tsy misy olona manana vola afa-miala ary maro amintsika no tsy afaka manome amin'ny antony rehetra, fa farafaharatsiny tiako ny hanao ny bitako. Raha olona iray mamaky an'ity ihany no manome dia ho tratrako ny tanjoko. Raha liana ianao dia manomeza. Ary raha tsy izany, farafaharatsiny mba ampio hampiely ny vaovao.
Ary inona no azoko?
Tonga tamin'ny fotoana nandrasan'ny rehetra izahay: Ny valisoa! Maninona no tsy misy fampielezan-kevitra fanangonam-bola ho vita izany raha tsy misy ny fanomezana kely amin'ny tetikasa. Ny sasany amin'ireo zavatra azonao atao dia ny:
Famihinana virtoaly amin'ny USD 15 fotsiny. Famihinana!
Un manao nanohana ara-bola 35 USD fotsiny. Heveriko fa ho toa izany "Noho ny fanampianao no nahavitana an'ity endri-javatra vaovao ity" ao amin'ny kitapom-bolan'ny Git.
Karatra paositra amin'ny 50 USD.
T tsy misy mihoatra ny 100 USD.
Manomboka amin'ny $ 1000, dia manomboka mahazo tarehimarika Gavroche, mascot an'ny tetikasa ianao. Ho an'ny $ 1000 dia azonao madio, vaovao avy amin'ny mpanonta 3D. $ 2000, tànana nolokoin'ny mpitarika ny tetikasa, Chris Webber.
Ary amin'ny $ 7500 fotsiny, Chris Webber dia handrahoana sakafo hariva ho anao. Mila mankany Wisconsin fotsiny ianao. Tsara ny manamarika fa afaka mitondra namana ianao ary ny sakafom-pisakafoanana dia hihinan-kena, na dia mety ho vegan aza. Vidy varotra!
Ny FSF dia mitantana ny fanangonam-bola, ka farany manome fanomezana roa ianao amin'ny vidin'ny iray. Nanazava i Webber (amin'ny anglisy) satria ny FSF no manao ny fanangonam-bola ary tsy Kickstarter na serivisy hafa, izay azo fintinina satria ny FSF dia matoky betsaka ny tetikasa ary manana ny fahafaha-manao fampielezan-kevitra mifanaraka amin'ny filan'izy ireo izy ireo.
Ka fantatrao. Raha manam-bola izy ireo ary manana fomba handoavana; ny maka fanahy kely ny fonao fotsiny ary manome dolara vitsivitsy ho an'ny tetikasa iray izay ho tena manandanja amin'ny ho avy. Manomeza azafady.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Andao samy hanohana ny GNU MediaGoblin!
Famihinana virtoaly xD
Mahatsapa fahafaham-po amin'ny fanohanana tetikasa iray izay mifantoka amin'ny fanaovana ny Internet ho toerana kely tsara kokoa. Ka azoko ny mamihina.
Eny, hanome 8000 dolara aho nefa tsy mila mitaky sakafo hariva, fa tsy manana aho.
Tombontsoa ho antsika rehetra ny fanapariaham-pahefana, indrindra satria manakana orinasa iray tsy hanana fifehezana ny zavatra rehetra navoaka. Mampihena ny mety hisian'ny sivana, fahatapahan'ny serivisy sns. Ary manamora ny fanananao ny angon-drakitrao. Raha avelako any amin'ny toerana tsy voafehiko ny fananako, farafaharatsiny itsinjaram-pahefana.
Toa tetikasa mahaliana be izany amiko. Handeha aho hanome.
Ahoana ny fomba hanombohana fandraisana anjara amin'ny Xfce na tetikasa loharano misokatra hafa
Ahoana ny fomba fampandehanana / famonoana ny touchpad amin'ny terminal